DivvyHQ: Volume Sare Qorshaynta Mawduuca iyo Shaqo-socodka | Martech Zone
Sabti, Sebtember 12, 2015 Douglas Karr
Haddii aad ka shaqeyneyso shirkad shirkad, qorsheynta iyo fulinta waxay udub dhexaad u tahay istiraatiijiyaddaada suuq-geynta guud. Caqabada ayaa ah maaraynta fikradaha, ilaha, shaqooyinka, iyo dib u eegista guud ahaan heerka wax soo saarka. DivvyHQBarmaamijku wuxuu bixiyaa dhammaan aaladaha lagama maarmaanka u ah fikirka illaa fulinta. Barxada waxaa loogu talagalay labada nuxur iyo daabacaadda baraha bulshada.
DivvyHQ waa daruur ku saleysan, qorshaynta nuxurka iyo soosaarka aaladda wax soo saarka oo loo dhisay si ay uga caawiso suuqleyda iyo soo saareyaasha wax soo saarku inay helaan / joogaan abaabul isla markaana si guul leh u fuliyaan dadaallada suuq geynta ee dhib badan, ee murugsan. Waxqabadka gaarka ah ee Divvy wuxuu isku daraa jadwallada ku saleysan websaydhka, maareynta maareynta iyo wada shaqeynta khadka tooska ah si looga caawiyo kooxaha caalamiga ah inay soo qabtaan fikradaha mawduucyada, u qoondeeyaan oo u jaangooyaan mashaariicda nuxurka leh, soo saar nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha ku jira isla markaana ku sii sugnaada waqtiga ugu dambeeya ee wax soo saarka.
Dashboard - Soo qaado sawir deg deg ah oo ku saabsan waxa xaq u leh, waxa la qabtay iyo waxa kooxdaadu hadda ku shaqeyneyso.
Kalandarrada Wadaagsan Ee Aan Xaddidnayn - Kalandarro badan oo wadaag ah sida aad ugu baahan tahay inaad adduunkaaga u habeysnaato iyo kooxdaada isla boggaas.
Maareynta Hawsha Fudud - Iyadoo aan loo eegin tirada kooxdaada, ama kakanaanta habka wax soo saarkaaga, Divvy ayaa kaa caawin doonta inaad ka hesho waxyaabahaaga la soo saaro, la ansixiyo oo si hufan loo daabaco.
Nooc Kasta Oo Ka Kooban - Waxaad soo saartaa wax ka badan uun waxyaabaha dijitaalka ah. Adeegso Divvy si aad uga caawiso qorsheynta iyo soo saarista nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha aad u baahan tahay inaad maareyso.
Mawduuc / Daabacaadda Bulshada - Ka tirtir boodboodka madasha oo si fudud ugu dheji waxyaabaha bulshada iyo sawirrada si toos ah Facebook, Twitter, iyo kuwa kale.
Dhig Fikradahaaga Weyn - Ayaa garanaya goorta iyo cidda fikradaha fikradaha leh ka imaan karaan. Goobaha Baabuurta loo yaqaan 'Divvy Parking Lot' waxay kooxdaada u oggolaaneysaa inay keydiso fikradahooda illaa kulanka xiga ee qorshahaaga nuxurka ah.
Ammaanka - Ku xafid macluumaadkaaga tallaabooyinka amniga ee ay DivvyHQ dejisay.
Waxaad isku dayi kartaa DivvyHQ bilaash adigoo isqoray goobta ay ku sugan yihiin.
Tags: meelaynta nuxurkakalandarka maadadaiskaashiga waxyaabahafikradaha ka koobansocodka nidaamka contentjadwalka waxyaabahadivvyhq
5 Fikradaha qaldan ee Suuqgeynta iyo Xaqiiqda